ကားကီးရီမုတ်ကို လေးကြိမ်ဆက်တိုက် နှိပ်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ - Tameelay
ကားကီးရီမုတ်ကို လေးကြိမ်ဆက်တိုက် နှိပ်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ
ကားကီးရီမုတ်ကို လေးကြိမ်ဆက်တိုက် နှိပ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ
အယ်လ်ဖတ်၊ ဆယ်လ်စီယာ၊ ဟာရီယာ၊ ပါဂျဲရိုး (ဖားပြုတ်)စတဲ့ ကားတွေရဲ့အသုံးဝင် ကီးရီမုတ်ဖန်ရှင် (key rem-ote function)တစ်ခုကို ဖော်ပြပါတယ်။
‘အဲဒီနည်းလေးက သိပြီးသားသူတွေအတွက် အထူးအဆန်းမဟုတ် ပေမဲ့ မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်အောင်ပြောပြတာဖြစ် တယ်လို့ ကားနည်းပညာတွေ လေ့လာနေတဲ့ ကိုထွန်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
ကားအပြင်ကိုရောက်ပြီးခါမှ လော့ခ်(lock)ချမယ်ဆိုပြီး ကားကို ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ နောက်တံခါးမှန်တွေမပိတ်ရသေးတာကြုံဖူးကြ မှာပါ။ အဲသည်အခါမှာ ကားထဲပြန်ဝင်၊ သော့ဖွင့်၊ မှန်တွေပြန်တင်၊ တံခါးပြန်ပိတ်၊ လော့ခ်ချအလုပ်တွေမရှုပ်ရအောင် ကီးရီမုတ်နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
အဲသည်ကီးရီမုတ်ရဲ့ခလုတ် (lock button)ကို ဆက်တိုက်လေးကြိမ် နှိပ်လိုက်ပြီး ဖိထားလိုက်ပါ။ မတင်ရသေးတဲ့တံခါးမှန်တွေ သူ့အလို လိုတက်လာမှာဖြစ်ပြီး တံခါးလော့ခ်တွေချပေးပါလိမ့်မယ်။ ဘက်ကြည့်မှန် ခေါက်မသိမ်းမိခဲ့ရင်တောင်မှ ခေါက်သိမ်းသွားပေးပါ လိမ့်မယ်။
ကားကိုနေပူထဲမှာ ရပ်ထားခဲ့မိရင်ပြန်လာတဲ့အခါမျိုးမှာ အဝေးကနေ key remote လေးနဲ့ unlock button ကို လေးကြိမ်ဆက်တိုက်နှိပ်ပြီး ဖိထားလိုက်ပါ။ တံခါးလေးပေါက်စလုံးက မှန်တွေကို သူ့အလိုလိုချပေးပါလိမ့်မယ်။ ခေါက်သိမ်းထားတဲ့ဘက် ကြည့်မှန်လေးကိုပါ ပြန်ဖွင့်ပေးသွားမှာပါ။ လေပူတွေကုန်လောက် တဲ့အခါမှ ကားထဲဝင်တော့အဆင်ပြေစေပါတယ်။
ကားကီးရီမုတျကို လေးကွိမျဆကျတိုကျ နှိပျရငျ ဘာဖွဈမလဲ
အယျလျဖတျ၊ ဆယျလျစီယာ၊ ဟာရီယာ၊ ပါဂြဲရိုး (ဖားပွုတျ)စတဲ့ ကားတှရေဲ့အသုံးဝငျ ကီးရီမုတျဖနျရှငျ (key rem-ote function)တဈခုကို ဖျောပွပါတယျ။
‘အဲဒီနညျးလေးက သိပွီးသားသူတှအေတှကျ အထူးအဆနျးမဟုတျ ပမေဲ့ မသိသေးတဲ့ သူတှအေတှကျ အသုံးပွုနိုငျအောငျပွောပွတာဖွဈ တယျလို့ ကားနညျးပညာတှေ လလေ့ာနတေဲ့ ကိုထှနျးထှနျးက ပွောပါတယျ။
ကားအပွငျကိုရောကျပွီးခါမှ လော့ချ(lock)ခမြယျဆိုပွီး ကားကို ပွနျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ နောကျတံခါးမှနျတှမေပိတျရသေးတာကွုံဖူးကွ မှာပါ။ အဲသညျအခါမှာ ကားထဲပွနျဝငျ၊ သော့ဖှငျ့၊ မှနျတှပွေနျတငျ၊ တံခါးပွနျပိတျ၊ လော့ချခအြလုပျတှမေရှုပျရအောငျ ကီးရီမုတျနဲ့ ဖွရှေငျးနိုငျပါတယျ။
အဲသညျကီးရီမုတျရဲ့ခလုတျ (lock button)ကို ဆကျတိုကျလေးကွိမျ နှိပျလိုကျပွီး ဖိထားလိုကျပါ။ မတငျရသေးတဲ့တံခါးမှနျတှေ သူ့အလို လိုတကျလာမှာဖွဈပွီး တံခါးလော့ချတှခေပြေးပါလိမျ့မယျ။ ဘကျကွညျ့မှနျ ခေါကျမသိမျးမိခဲ့ရငျတောငျမှ ခေါကျသိမျးသှားပေးပါ လိမျ့မယျ။
ကားကိုနပေူထဲမှာ ရပျထားခဲ့မိရငျပွနျလာတဲ့အခါမြိုးမှာ အဝေးကနေ key remote လေးနဲ့ unlock button ကို လေးကွိမျဆကျတိုကျနှိပျပွီး ဖိထားလိုကျပါ။ တံခါးလေးပေါကျစလုံးက မှနျတှကေို သူ့အလိုလိုခပြေးပါလိမျ့မယျ။ ခေါကျသိမျးထားတဲ့ဘကျ ကွညျ့မှနျလေးကိုပါ ပွနျဖှငျ့ပေးသှားမှာပါ။ လပေူတှကေုနျလောကျ တဲ့အခါမှ ကားထဲဝငျတော့အဆငျပွစေပေါတယျ။
သင့်​မှာ အချိန်​ သုံးမိနစ်​​လောက်​ ပို​နေရင် ဒီ Post​​လေးကိုဖတ်​ကြည့်​​ပေးပါ.
သင့်​မှာ အချိန်​ #သုံးမိနစ်​​လောက်​ ပို​နေရင် ဒီ Post​​လေးကိုဖတ်​ကြည့်​​ပေးပါ. ကျွန်မ ဒီ post ကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိအမျိုးသမီးများအားလုံးကိုယ်စားရေးပါရစေရှင် fb သုံးတာဟာ အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုး အလုပ်အကိုင်အခြေအနေအမျိုးမျိုး ပညာအရည်အချင်းအမ်ျုးမျိုး ကြီးကြီးငယ်ငယ် ပျိုပျိုအိုအို ကျားမ မရွေး ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အခုတလော ကျွန်မအပါအဝင် အမျိုးသမီး အတော်များများ …
လူတစ်ယောက် သေပြီးရင် ဘာတွေ လှူလို့ရလဲဆိုတာ… အပြည့်အစုံ သိထားရန်
လူတစ်ယောက်သေပြီးပြီးချင်း သင်​ကိုယ်​တိုင်​ လှူနိုင်​​သော အလှူတစ်​ခု လူတစ်ယောက်သေပြီးပြီးချင်း (1)နှလုံးက10မိနစ်အထိရှင်ပါတယ်။ (2)ဦးနှောက်ကမိနစ်20အထိရှင်တယ်။ (3)မျက်လုံးက4နာရီအထိရှင်ပါတယ်။ (4)အရေပြားကငါးရက်အထိရှင်ပါတယ်။ (5)အရိုးကရက်30အထိရှင်တယ်လို့သိရတယ်။ သေလွန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသုံးရက်အကြာမှာလက်သည်းခွံတွေကြွေတယ်။ လေးရက်အကြာမှာဆံပင်တွေကျွတ်တယ်။ ငါးရက်အကြာမှာဦးနှောက်ကအရည်ပျော်တယ်။ ခြောက်ရက်အကြာမှာအစာအိမ်ကအရည်ဖြစ်ပြီးပါးစပ်နဲ့ဒွါရပေါက်ကနေယိုစီးတယ်။ ရက်ခြောက်ဆယ်အကြာမှာအရိုးကကမ္မဌာန်းရုပ်ကလွဲလို့ဘာမှမကျန်အောင်ခြောက်သွေ့သွားတယ်။ လူတစ်ယောက်ကသူသေဆုံးပြီးနောက်အလှုနှစ်ခုထပ်မံပြုလုပ်လှုဒါန်းနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုဒါန်းခြင်းနဲ့မျက်ကြည်လွှာလှုဒါန်းနိုင်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်တယ်။ သေဆုံးပြီးနောက်တန်ဖိုးမရှိသုံးမရတော့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းပြီးပြာကျခံမယ့်တူတူအကျိုးပြုပေးနိုင်မယ့်နေရာတွေမှာလှုဒါန်းပေးလိုက်တော့အလှုနှင့်အမြင်အာရုံချို့တဲ့သူတွေအတွက်အလင်းဓါတ်အမြင်ဓါတ်ရရှိပိုင်ဆိုင်စေဖို့မျက်ကြည်လွှာလှုဒါန်းခြင်းအလှုတွေလှုဒါန်းသွားလို့ရတယ်။ လူတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးနောက်(4)နာရီအတွင်းမျက်ကြည်လွှာကရှင်နေသေးတဲ့အတွက်လှုဒါန်းထားလို့ရတယ်။ ဆန္ဒရှိပါကခန္ဓာကိုယ်ပါထပ်လှုလို့လဲရတယ်။ဆေးပညာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်ဖို့ပညာသင်ကြားတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုတယ်။ အချို့ကတော့မသိလို့အဆက်စပ်မရှိလို့မလှုဖြစ်ကြသူတွေရှိတယ်။ကျွန်မကတော့သေဆုံးပြီးကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိပဲပုပ်သိုးပြီးသုံးမရအလဟဿအဖြစ်မခံနိုင်လို့ခင်တွယ်မမက်မောပဲပြတ်သားတဲ့စိတ်နဲ့အကျိုးပြုပေးမယ့်နေရာမှာလှုဒါန်းဖြစ်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီ။ လှုဒါန်းလိုသူများcity mallနားကဆေး(၁)မှာလဲလှုလို့ရသလိုမြောက်ဥက္ကလာဆေး(၂)မှာလှုလို့ရပါတယ်။ မျက်ကြည်လွှာကိုတော့ကန်ပတ်လမ်းမျက်စိဆေးရုံကြီးအပေါ်ဆုံးထပ်မှာလှုဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ မျက်စိဆေးရုံရောက်ရင်တော့မျက်မမြင်လူနာပေါင်းများစွာကိုတွေ့ရင်ငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါလားဆိုတဲ့မုဒိတာစိတ်တွေတိုးလာပါလိမ့်မယ်။ …
ရုံးပတေသီးမှာ ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပြီး ဗီတာမင်စီ ဓာတ်မြင့်မားကာ Folate ဓာတ်တွေလည်းပါဝင်ပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးနိုင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပါ။ ဈေးနှုန်းသက်သာပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ရုံးပတေသီးမှာ ဗီတာမင်စီဓာတ်ပါဝင်မှုများတာကြောင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါသည်တွေအတွက် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအစာတွေက ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ရင်ကျပ်ရောဂါအတွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနတစ်ခုကို Thorax …